June 9, 2018 - TV Annapurna
काेरिया भाषा परीक्षामा ४७ नक्कली विद्यार्थी पक्राउ
June 9, 2018 Annapurna TV
काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले नवौँ कोरियन भाषा परीक्षा दिने ४७ नक्कली परीक्षार्थीलाई पक्राउ गरेको छ । परिसरअन्तर्गतका विभिन्न वृत्त तथा प्रभागको टोलीले काठमाडौँका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट उनीहरुलाई आज दिउँसो नियन्त्रणमा लिएको हो । परिसरका प्रवक्ता मोहनकुमार थापाले सातवटा परीक्षा केन्द्रमा अर्को व्यक्तिको परीक्षा दिन राहदानी र प्रवेशपत्रसमेत लिई परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा जाँच गर्दा नक्कली परीक्षार्थीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । तीमध्ये जेभियर इन्टरनेशनल स्कुल, बौद्धबाट १३ जना, गोल्डेनगेट इन्टरनेशनल कलेज बत्तीसपुतलीबाट एक, भिएस निकेतन तीनकुनेबाट ११, नोवेल एकेडेमी नयाँ बानेश्वरबाट पाँच, युनिभर्सल कलेज, मैतीदेवीबाट पाँच, जेभियर इन्टरनेशनल कलेज, कालोपुलबाट…
अमेरिकाका महत्वपूर्ण विवरणहरु चीनले चोरी गरेको अमेरिकाको आरोप
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले चीनले अमेरिकी नेभीको महत्वपूर्ण विवरणहरु चोरी गरेको आरोप लगाएका छन्। चीनले नेभीमा रहेको उच्च संवेदनशील विवरणहरु चोरी गरेको आरोप लगाइएको हो। अमेरिकाको सुपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्टका महत्वपूर्ण विवरणहरु चीनले चोरी गरेको अमेरिकाको आरोप छ। अमेरिकी अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार गएको जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा सो आक्रमण भएको हो। ह्याकरहरुले अमेरिकाको पानीमुनिको हतियार र अन्य समद्री हतियारहरुको विषयमा काम गरिरहेको सैन्य संगठनको विवरणहरु चोरी गरेका हुन्। अमेरिकाको गुप्तचर संस्था एफबीआईले यस विषयमा अनुसन्धान सुरु भइरहेको जानकारी दिएको छ। सन् २०२० सम्मको अवधिमा एन्टि सिप मिसाइल प्रणाली इन्स्टल गर्ने योजनामा अमेरिका अघि बढिरहेको…
दश कक्षाको पुस्तकमा किन राखियो एमाले-माओवादी पार्टी एकताको तस्बिर ?
June 9, 2018 TV-Annapurna
सरकारले २०६९ सालमै पाठ्यक्रममा आधारित गाइड र गेसपेपर जस्ता पुस्तक प्रकाशनमा रोक लगाए पनि बजारमा यही शैलीको पुस्तक बिक्रीवितरण भइरहेको पाइएको छ । काठमाडौं, सुकेधारास्थित सञ्जीवनी पब्लिकेसन्सले कक्षा १० को सामाजिक विषय अंग्रेजी भाषाको ‘कम्प्लिट रिफ्रेन्स’ पुस्तक अनधिकृत रूपमा बजारमा ल्याएको हो । पुस्तकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तस्बिरसमेत राखिएको छ । त्यति मात्र होइन, पुस्तकको आवरणमा एमाले–माओवादी केन्द्र पार्टी एकताको तस्बिर छ । शिक्षा विभागले गाइड, गेसपेपर, रिफ्रेन्स बुकजस्ता परीक्षाकेन्द्रित पुस्तक प्रकाशन र बिक्रीवितरणमा २०६९ सालदेखि नै रोक लगाएकाले यो अनधिकृत काम भएको जनाएको छ । पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्नुअघि…
काठमाडौँ देखि गोरखासम्म डा. उपेन्द्र देवकोटा (फोटो फिचर)
June 9, 2018 June 9, 2018 TV-Annapurna
उपचाररत वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा.उपेन्द्र देवकोटा शनिबार जन्मथलो पुगेका छन्। उनलाई हेलिकप्टर मार्फत जन्मथलो गोरखा लगिएको हो। देवकोटाले पुर्ख्यौली घर पुग्ने र गाउँको धाराको पानी पिउने इच्छा व्यक्त गरेपछि उनलाई गोरखाको पण्डितगाउँ लगिएको हो। उनको जन्मगाउँ पण्डित गाऊँ नजिक बोहोरा गाउँमा हेलिकप्टर रोकेर उनलाई पुर्ख्यौली घरमा लगिएको थियो। उनलाई घरको पीढि राखिएको थियो। करिब ४० मिनेट घरमा बसेपछि आजनै उनलाई काठमाडौं ल्याइएको छ। देवकोटाको न्यूरो हस्पिटल बाँसबारीमा उपचार भइरहेको छ।
पाँच महिना पुग्दा पनि अझै खुलेन महेन्द्र क्याम्पसको ताला
अनिल पोखरेल, राजविराज । सप्तरीको महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजमा पाँच महिना अघि गरिएको तालाबन्दी अझैं नखुल्दा क्याम्पसको दैनिक कामकाज प्रभावित रहँदै आएको छ । क्याम्पसलाई राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा गाभ्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध गत माघ २१ गते चरणवद्ध आन्दोलन थालेका प्राध्यापकहरूले क्याम्पसको मूल गेटमै तालाबन्दी गरेका थिए । तालाबन्दीका कारण विद्यार्थीहरूको पठनपाठन र परीक्षा समेत प्रभावित हुने भएपछि उनीहरूले क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । २०१४ सालमा स्थापित क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्व विद्यालयकै आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा रहने गरी सरकारी निर्णय सच्याउनुपर्ने आफूहरूको मूल माग रहेको सङ्घर्ष…
आमा छोराको शंकास्पद मृत्यु , प्रहरी पुग्दा परिवारका अन्य सदस्य फरार
रौतहटमा आमा छोराको शंकास्पद मृत्यु भएको छ। स्थानीय माधवनाराया नगरपालिका वडा नम्बर १ दिपहीका नागेन्द्र यादवको ३० बर्षीया श्रीमती मरिता यादव र उनका ४ बर्षीय छोरा रामन यादवको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको छ। मृतक महिलाका श्रीमान नागेन्द्र वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा करिब दुई बर्षअघि मलेसिया गएपछि उनका छोरा र श्रीमतीलाई घरपरिवारले विभिन्न किसिमको यातना दिँदै आएका थिए। तीन दिनअघि देवर दिपेन्द्र यादव र देवरानीले मरितालाई विभिन्न किसिमको धाकधम्की दिएका थिए। श्रीमानले कमाएर विदेशबाट पठाएको रकम मरिताले खोजविन गरेपछि देवर र देवरानीले उनलाई विभिन्न किसिमको यातना दिँदै आएकोले उनीहरुको यातना सहन नसकेर…
आफ्नै बुवामाथि खुकुरी प्रहार गर्ने भुजेल पक्राउ
जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले आफ्नै बुवालाई खुकुरी प्रहार गर्ने एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अरुणमा गाउँपालिका –४ चरम्वी वस्ने २५ वर्षीय टंक भुजेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। टंकले सामान्य विवाद हुँदा आफ्नै बुवा ५५ वर्षीय दान बहादुर भुलेललाई शुक्रबार साँझ खुकुरी प्रहार गरेको प्रहरीको भनाई छ। खुकरी प्रहारबाट दान बहादुरको ओठ, बाँया हातको नाडी र पातामा गम्भिर चोट लागेको छ। घाइतेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्याउलीमा अचेत अवस्थामा सामान्य उपचारपछि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको छ। खुकुरीसहित पक्राउ परेका टंकको विषय अनुसन्धान भइरहको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटः उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी र एपीएफ क्लव आमने सामन
काठमाडौंमा जारी प्रधानमन्त्री कप एकदिवशीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि बिभागीय टोलीहरु त्रिभुवन आर्मी क्लव र एपीएफ क्लव आमने सामने हुने भएका छन् । शनिबार भएको वर्षाले प्रभावित दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा नेपाल पुलिसलाई ९ रनले हराउँदै एपीएफले फाइनलमा आर्मीसँगको भेट पक्का गरेको हो । यसअघि शुक्रबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा प्रदेश ५ लाई हराउँदै आर्मी फाइनलमा पुगेको हो । एपीएफ र आर्मीबीचको फाइनल खेल आइतबार टियू मैदान कीर्तिपुरमा हुनेछ । टियू क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको एपीएफले ४८ दशमलव ५ ओभरमा अलआउट हुँदै २ सय ८ रन बनाएको…
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार अभिनित फिल्म ‘ट्वाइलेट एक प्रेमकथा’ले चीनमा आक्रामक व्यापार गरेको छ। भारतीय बक्स अफिसमा हिट भएको फिल्मले चीनमा पनि राम्रो सुरुवात गरेको हो। फिल्मले प्रदर्शनको पहिलो दिन १५ करोड ९४ लाख भारुको कारोबार गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यो आँकडा सँगै चीनमा पहिलो दिन धेरै कलेक्सन गर्ने दोस्रो हिन्दी फिल्म बनेको छ ट्वाइलेट हिरो। यो फिल्म हेर्न पहिलो दिन करिब ५ लाख मानिस हल गएको बताइएको छ। वितरकका अनुसार फिल्मले दिनमा ५६ हजारभन्दा बढी शो पाइरहेको छ। फिल्मलाई चीनमा रुचाइएपछि अभिनेता अक्षय कुमारले ट्वीटरमार्फत दर्शकलाई धन्यवाद भनेका…
सभापति देउवाले कारबाही गर्नुपर्छ भनेपछि तात्यो काँग्रेस, कारबाहीका लागि सभाषद सहित २० जनाको सूची तयार(सूचीसहित)
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले शुक्रबार कैलालीको धनगढीमा निर्वाचनका बेला अन्तरघात गर्ने लाई कारबाही गर्ने बताएको पछिल्लो दिन नै कैलाली काँग्रेसले कारबाहीका लागि सूची तयार पारेका छ। । विभिन्न क्षेत्रबाट प्रदेश र प्रतिनिधीसभा चुनावमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई पराजित गर्न भुमिका खेलेको भन्दै कार्यक्रताको नाम सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली काँग्रेसको निर्वाचन परिचालन मूल समितिका स्थानीय तहका वडामा रहेका विभिन्न वडा संयोजकहरुले आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्नेहरुको नाम कारवाहीका लागि जिल्ला सिफारिस गरेको हो । कारबाहीको लागि २० जनाको नाम सिफारिस गरिएकोमा पहिलो नम्बरमा पार्टीका निवर्तमान सांसद पुष्करनाथ ओझाको नाम…